Perikopa FJKM alahady 29 Septambra 2013 | FJKM Amboniloha
Perikopa FJKM alahady 29 Septambra 2013
9 Ary Nehemia governora sy Ezra mpisorona, mpanora-dalàna, ary ny Levita izay nampianatra ny olona dia nanao tamin’ny olona rehetra hoe: Masina ho an’i Jehovah Andriamanitrareo ity andro ity; koa aza malahelo na mitomany. Fa nitomany ny olona rehetra raha nandre ny tenin’ny lalàna.
10 Dia hoy izy taminy: Mandehana, hano ny matavy, ary sotroy ny mamy, dia mba anatero anjara izay tsy manan-javatra voavoatra; fa masina ho an’ny Tompontsika ity andro ity; koa aza malahelo ianareo, fa ny fifaliana avy amin’i Jehovah no fiarovana mafy ho anareo.
I Tesaloniana 5:23-28
23 Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin’ny fihavian’i Jesosy Kristy Tompontsika.
26 Manaova veloma ny rahalahy rehetra amin’ny fanorohana masina.
27 Mampianiana anareo amin’ny Tompo aho mba hovakina amin’ny rahalahy* rehetra ity epistily ity. [* Na: (rahalahy masina)]
28 Ho aminareo anie ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika.